मकाउ मा3दिन कसरी बिताउन | सडकको लागि एक युगल
मकाउ छ चीनको एक भित्री क्षेत्र त्यो धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूको अर्को यात्रा गन्तव्यको रूपमा छनौट गर्दैछन्, र यो किन देख्न गाह्रो छैन किन। क्षेत्र संस्कृति संग समृद्ध हो, मनमा झुकाव वास्तुकला संयोजन को साथ मंत्रिमंडल वाला स्क्वाक - जस्तै वार्षिक मकाउ काउन्टी - वास्तव मा स्वादिष्ट स्थानीय व्यञ्जन संग। यदि तपाईंले विस्तारित अवधिको लागि चीनमा हुनुहुन्छ भने, यो म्याकाउमा3दिन खर्च गर्न यसको लायक छ!
शहरको रोचक इतिहासले एशियाई र युरोपियन संस्कृतहरूको एक विशिष्ट मिश्रण सिर्जना गरेको छ जुन मकाउलाई कुनै पनि यात्रीको सूचीमा आकर्षक लक्ष्य बनाइएको छ। भोजन को लागि मरने को लागि छ, शहर को डिजाइन को प्रभावशाली छ र रात को जीवन को कुनै पनि नहीं; धेरैले मकाउलाई मनपर्छ संयुक्त राज्य अमेरिकाको पाप शहरको उज्यालो रोशनी र सेक्सी अन्तटोन को। जब मकाउ यसको अमेरिकी समकक्ष भन्दा कम चकित छ, यसको सट्टा अपोलेंस, लक्जरी र कक्षाको साथ यसको लागि बनाउँछ।
मकाउ को यात्रा को यात्रा गर्नु भन्दा पहिले, तपाईं केवल त्यहाँ के हेर्न चाहानुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ - तपाईंसँग मात्र एक3दिन यात्रा कार्यक्रम छ। संसारको यो भागमा जलवायु subtropical छ, अर्थ भनेको यदि तपाईं गर्मीलाई सम्भाल्न सक्नुहुन्न भने, यो शायद अक्टोबर देखि मई सम्मको कूलर महिनाको दौडान भ्रमण गर्न उत्तम छ। तथापि, यदि तपाइँ 30 ° C भन्दा माथि तापमान घटाउन र 95% नमी मन नदिनु हुन्छ, त्यसपछि बाँकी वर्ष तपाईंको लागि आदर्श हुनेछ, बरसातको मौसम चल्ने म्याच अक्टोबरमा।
मकाउ सबै भन्दा अधिक क्षेत्रमा सजिलै हिँड्न सकिने छ, त्यसैले यो दिमागमा रहनुहोस् जब मौसमको मौसममा तपाईं सहज हुन सक्नुहुनेछ विचार गर्नुहोस्; कुनै पनि नजिकैको वातानुकूलित स्टोरमा हरेक पाँच मिनेट मात्र बाँकी रहन पछि हटाउन चाहँदैन।
त्यहाँ धेरै घटनाहरू छन् जुन केही निश्चित समयमा वर्ष, जस्तै चिनार चाइना न्यू वर्ष, ड्रैगन नाव फेस्टिवल र सर्दिस सोलस्टिस। त्यसो भए, यीमध्ये कुनै पनि तपाईंको कर गर्ने सूचीमा छन् भने, तपाईंको भ्रमणले योजनाबद्ध त्यस्ता उत्सवहरूसँग सम्बद्ध बनाउँदछ।
एक पल्ट जब तपाईं निर्णय गरे पछि जेट बाहिर, यो म्याक मा आफ्नो3दिन को समयमा रहन ठाँउ चुन्नुहोस। मकाउ सबै स्वादहरू, रूचिहरू र बजेटहरूमा पुग्छ, ताकि तपाईं 5-तारा विलासिता चाहनुहुन्छ (जस्तै कि अविश्वसनीय वेनिस मकाओमा फेला परेको छ) वा माछाको माटोमा (जस्तै मिडवेक सम्झौता पुरानो शहरको सोफिटमा उपलब्ध छ), तपाई निश्चित हुनुहुन्छ सही मेल खोज्न।
पुरानो मकाउ इतिहास बफको लागि हो जुन स्थान र स्थानको विरासतमा लिने मनपर्छ; 16 लाई पुरानो तरिका पुरानो शहरको मितिका भागहरूth शताब्दी, र सम्पूर्ण केन्द्र युनेस्को विश्व विरासत स्थल हो। तथापि, कोटीई धेरै फरक हुन सकेन। यस क्षेत्रको दक्षिणी क्षेत्रमा स्थित, यो मकाउको प्रसिद्ध सुपर क्यासिनो, डिजाइनर किनमेल केन्द्र र जीवंत नाइटलाइन्स होस्ट गरिएको छ, र यो ब्रान्ड-नयाँ भवनहरू बनाइन्छ।
जब मकाउ मा पुग्दा पहिलो चोटि काम गर्ने हो: खाई! मकाउको चिनियाँ र पोर्चुगल संस्कृतिको मिश्रणले केही साँच्चै स्वादिष्ट पाक उपचारको परिणाम पाएको छ। तपाईंको सूचीको शीर्षमा हुनुपर्छ पोर्चुगल अण्डा कोटा, पोर्चुगल मा पेस्टिस डीटा फिर्ता फिर्ता भनिन्छ; कमाण्डर र पेस्ट्रीको यो रमणीय सानो संयोजन पनि स्वाद कलहरु को कम से कम साहसी छ। अधिक savory ताल को लागि, वहाँ tacho (एक प्रकार का स्टू) या minchi (diced आलू के साथ मांसपेशी मांस और वर्कसेस सॉस) है।
निश्चित छ कि तपाइँ राम्रो तरिकाले फलफूल हुनुहुन्छ, यो मकाउको सबैभन्दा प्रभावशाली स्थलचिन्हका केही भ्रमण गर्न समय छ। सेन्ट पॉलको मितिको खण्डहरू 16 मा फिर्ताth शताब्दीमा र सेन्ट पॉलको कलेज र बिस्तारै पन्टलका क्याटाडोल्डको अवस्थित समावेश गर्दछ; खंडहर क्षेत्र मा सबै भन्दा लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण मध्ये एक हो, तर तिनीहरू एक यात्रा को लायक हुन्छन्।
त्यहाँ एक-मा मन्दिर पनि छ, देवी माझूलाई समर्पित गरिएको छ, जसमा मकाऊ मूल रूपमा नामकरण गरिएको थियो। यो ढाँचा पारंपरिक चीनी शैलीमा बनाइयो र यसलाई राम्रो तरिकाले संरक्षित गरिएको छ किनभने यो 15 मा निर्माण भएको थियोth शताब्दीका।
अर्को, यो पट्टी-कोटाई पट्टीमा हिट गर्ने समय हो। आधुनिक, असाध्यै रिसोर्ट्स को यो संग्रहमा तपाईंले केहि मनोरञ्जनको लागि आवश्यक हुन सक्दछ; तपाईं अन-लोकप्रिय क्यासिनोहरू, विशाल खरीदारी केन्द्रहरू, विशेष रूपमा निर्माण गरिएका आकर्षणहरू (लघु एफिल टवर, सबैलाई?) र शीर्ष-पोर्च ईटरियरिङहरू जाँच्न सक्नुहुनेछ, जसमध्ये धेरैमध्ये एक छत छ। यो अचम्मलाग्दो स्तरमा मनोरञ्जन हो र विश्वास हुनुको लागि हेर्न आवश्यक छ।
श्रेणी: एशिया, चीन, यात्रा योजना टैग: चीन, मकाउ, यात्रा योजना
← न्यू इंग्लैंड क्लम चावडर
फ्रेन्च प्याज सूप →